Ubungozi bokutya kweMicrowave - Ukutya Kukhuseleko
Ubungozi bokutya kweMicrowave
Akukho bungqina buxhasa amabango ukuba kukho iingoziukutya kwemicrowavekwimpilo yakho xa ulandela imigaqo yokhuseleko. Nangona kunjalo, uphando oluthe kratya lunokuqinisekisa uluvo lwengcali lwangoku lokuba, nangona ukubonwa kumanqanaba aphezulu ee-microwaves kunokulimaza izicwili zakho, azibangeli ziphumo zibi kukutya kwakho.
Amandla emicrowave afudumeza kwaye apheke ukutya ngokungangqalanga ngokubangcangcazela ngamandla emanzini nakwezinye iimolekyuli ekutyeni, ebangela ukuba bangcangcazele ngokukhawuleza kwaye bavelise ubushushu okanye amandla ashushu. Kukho iintsomi eziqhubekayo kunye nemibuzo malunga nefuthe elibi lee-microwaves ekutyeni.
Iifoto zoKhuseleko lweHolide yemiCimbi yakho
Iziphumo kwiiMolekyuli zokutya
Ngaphandle kobungqina obuxhasayo, abanye ababhali bathi ukuba, ukongeza kwisiphumo sokufudumeza, ukupheka kwimicrowave kunefuthe 'lokusasazeka kwemitha' ekutyeni. Intsomi yeyokuba amaqhekeza okupheka kwimicrowave, 'atshabalalise ngogonyamelo,' kwaye aguqula iimolekyuli zokutya zibe yityhefu, zizinto ezibangela umhlaza.
Akukho bungqina beli 'microwave radiation effect' ekutyeni, ngokwe I-World Health Organization (WHO) uphononongo. Ukutya 'akuyi kuba yi-radioactive' 'xa kuphekwe kwimicrowave, kwaye ayigcini ii-microwave xa ucima i-oveni.
Ukongeza, nangona zikhonaiingozi zezongezo kunye nokulondolozwakukutya esele kubekiwe, kwimicrowave, abukho ubungqina bokuba ukupheka kwemicrowave kuguqula ezi khemikhali zibe zizinto ezinetyhefu.
Iziphumo kwizondlo zokutya
Kukwakho nemibuzo malunga nokupheliswa kokutya okunempilo ngexesha lokupheka kwemicrowave. Nangona kunjalo, a Ezempilo zeHarvard uphononongo luthi akukho bungqina bokuba ukutya kwe-microwaving kunciphisa ixabiso lesondlo. Ngapha koko, xa kuthelekiswa nokupheka okuqhelekileyo, ii-microwaves zipheka ukutya ngokukhawuleza emanzini amancinci, ke mancinci amathuba okutshatyalaliswa okanye ukuxhoma iivithamini kunye neeminerali emanzini. Kukho ubungqina obuncinci bokuba izondlo ziyalahleka ukuba ubisi lwebele okanye ubisi olungumgubo lweentsana luyatshiswa kwimicrowave.
Ubungozi bokuFudumeza okungalinganiyo
Imicroowaves ivelisa ubushushu kumaleko angaphandle okutya kuqala, athi emva koko adlulisele ubushushu kwiindawo ezingaphakathi zokutya. Ukutya okuqinileyo kunye nokutya okunamanzi amancinci kushushu kancinci kancinci, kwaye okunye ukutya kunokupheka ngokungalinganiyo. Ngokutsho kovavanyo lwe-WHO, ukupheka okungalinganiyo kunokubangela ezi ngxaki zilandelayo:
Ukutya okungaphekwanga: Iinxalenye zokutya zinokungapheki xa ususa ehovini. Oku kubeka umngcipheko wokutya iibacteria ukuba ukutya okungqindilili akuvunyelwa ukuba 'kuphumle' kusasaze ubushushu ngokulinganayo ngaphambi kokutya.
Iindawo ezishushu ezingaqhelekanga: Ukufudumeza okungalinganiyo kunokudala amabala ashushu ngaphakathi kokutya onokuthi ungazi. La mabala anokukutshisa xa usitya ukutya kwangoko kwi-oveni. Oku kubaluleke kakhulu ekukwazini ukutshisa umqala womntwana ukuba ubisi lwakhe lufudumele kwi-microwave.
Iindawo ezifudumeleyo: Iindawo ezishushu ezifudumeleyo zinokubakho kulwelo olungabonakali lubilayo ngaphezulu kodwa luqhuma xa uzisa icephe okanye enye into, ibangela ukutsha okukhulu.
Ukuqhuma kokutya: Ukutya okuthile okufana nezinja ezishushu kunye namaqanda apheka ngokungalinganiyo kwaye angenako ukukhupha umphunga unokuqhushumba ehovini kwaye kunokubangela ukwenzakala.
Iziphumo kwiziqulathi zokutya
Imicroowaves ayitshisi ngqo kwizikhongozeli zokutya kodwa ikwenza oko ngokungathanga ngqo ngokudlulisa ubushushu kokutya okushushu. Iziqulathi zinokufudumeza kwaye zitshise, ke kubalulekile ukuqonda oku kulandelayo:
Izikhongozeli zokutya esele zipakishwe : Izikhongozeli zokutya okwenziwe kwangaphambili kwemicrowave eza kulawulwa kukhuseleko lwe-microwave ngemigangatho ye-FDA. Ngaphandle kokuba batshise kwimicrowave, akufuneki kubekho ingozi yokufaka imichiza ekutyeni. Sukuphinda usebenzise ezi zikhongozeli kuyo nayiphi na i-microwave yokuzifudumeza okanye yokupheka.
Cookware zeplastiki: Iiplastiki zokupheka ii-microwave zokupheka kufuneka zibe nelebheli ye 'microwave safe'. Ezinye izikhongozeli zeplastiki zinokuba neekhemikhali zokwenziwa, ezinje nge-bisphenol A (BPA, enokuba yingozi ukuba itya ukutya ngexesha lokupheka kwemicrowave, ngokwe Amaziko kaZwelonke wezeMpilo (NIH)). Oku kubaluleke kakhulu kwiintsana nakubantwana. Musa ukufudumeza ubisi okanye ukutya kwazo nakweyiphi na into yeplastiki.
Ezinye izikhongozeli: Izikhongozeli zeglasi kunye nezeseramiki, i-wax okanye iphepha lesikhumba, kunye neetawuli zamaphepha amhlophe zithathwa njengezikhuselekileyo ekwenzeni i-microwave ngaphandle kokukhathazeka ngamachiza ayityhefu angena ekutyeni kwakho.
Ukuboniswa kweMitha yeMicrowave
Ii Microwaves ziyinxalenye ye-electromagnetic spectrum macala onke kuthi. Zikhona kumandla asezantsi, amaza omoya osisiphelo esibonakalayo kwaye anamandla angaphantsi kunee-x-ray kwelinye icala. Kuba i-oven yakho ye-microwave , ii-microwaves zenziwe ngamandla avela kumbane wakho wombane ngeyunithi ehovini.
Amanqanaba amakhulu emitha ye-microwave anokufudumeza amanzi anezicubu zomntu kunye nokonakalisa iiseli. Nangona kunjalo, akukho zifundo zabantu kwiziphumo zokuvezwa kwamanqanaba asezantsi ee-microwaves ngexesha lokupheka. Akukho bungqina bokuba xa usebenzisa i-oven ekhuselekileyo ye-microwave kunye nokukhuseleka kokukhusela, unokuchaphazeleka kumanqanaba ayingozi kwimitha ye-microwave.
Imigaqo yoKhuseleko ye-FDA
Inkqubo ye- United States Ulawulo lokutya kunye neziyobisi (FDA) inemigaqo engqongqo yokhuseleko ekwakhiweni kwee-oven microwaves kunye namanqanaba ee-microwave ezingezizo abazenzayo. Ngokwe-FDA, umngcipheko we-oven microwave engacacanga evuzayo amanqanaba e-microwaves asezantsi ukuba i-oveni yenziwe kwimigangatho engqongqo. Iindlela zokhuseleko zibandakanya ukudibanisa ukuthintela ukuveliswa kwee-microwaves xa i-oveni ivulekile.
Ngokutsho kwe-FDA, kwii-intshi ezimbini ukusuka ehovini eyenziwe kwimigangatho yabo, imitha ye-microwave ingaphantsi kakhulu kwaziwa ngokuba yingozi ebantwini. Ukongeza, okukhona usiya kude ne-oveni, kokukhona kuya kuncipha ukubakho kwemitha eyingozi. Ngokukwanjalo, akukho radiation xa imicrowave ime, kwaye uvula umnyango.
Ukhuseleko lokutya kweMicrowave
Ukunciphisa iingozi ezinokubakho ekutyeni kwe-microwave, ukunqanda ukurhweba ngamachiza ekutyeni, kunye nokunciphisa umngcipheko we-radiation, landela i-FDA kunye United States Isebe lezoLimo (USDA) izikhokelo, ezibandakanya:
Sebenzisa izikhongozeli ezikhuselekileyo kwimicrowave. Ukuba usebenzisa iiplastikhi okanye izikhongozeli ze-styrofoam, qiniseka ukuba zikhuselekile ekwenzeni ukutya okungenazintsholongwane okanye ulwelo.
Izembozo zeplastiki kunye nemisongelo yeplastiki kufuneka ikhuseleke kwimicrowave.
Sukusebenzisa izikhongozeli ezitshisiweyo okanye ezikratshiweyo.
Sukuphinda uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde
Ungaze usebenzise isikhongozeli sesinyithi, esinokubonisa ii-microwave kunye nokonakalisa ingaphakathi le-oveni.
Ukuthintela iindawo ezishushu, pheka ukutya kwitreyi ejikelezayo kwaye uyishukumise phakathi kwendlela xa upheka.
Qinisekisa ukuba ukutya kuphekwe kakuhle ngokukuvumela ukuba uphumle imizuzu embalwa ngaphambi kokutya.
Ukunciphisa ukutsha kwisikhongozeli, qiniseka ukuba awugqithisi okanye ugqithise ukutya.
Qinisekisa ukuba i-oven yakho ihlangabezana nemimiselo yokhuseleko ye-FDA.
Amatywina ajikeleze ukuvulwa kwe-oveni kunye nomnyango kufuneka ungabinangxaki.
Sukuma kufutshane nemicrowave ngelixa ivuliwe.
Ukufudumeza imicrowave kunye nokupheka kuyakhawuleza, kulula kwaye kukhuselekile phantsi kwezikhokelo ezikhoyo. Akukho bungqina bunyanzelisayo bokuthi butshabalalisa iimolekyuli zokutya okanye izakha mzimba, yonwabele indlela elula ngayo. Qiniseka ukuba ulandela onke amanyathelo okhuseleko lokutya kwaye uzikhusele kumanqanaba angakhuselekanga kwimitha ye-microwave ngexesha lokupheka.
Ukwamkelwa Komtshato Cat Expert Intliwanondlebe Ubambiso Ukuhlawula Amatyala Imigangatho Ye-Organic Khitshini Collectibles
yintoni ekhupha intshungama ezingubeni
umtyisa ntoni ufudo
indlela yokucoca ifanitshala yamaplanga endala
ukuphuma kwintengiso yefenitshala yeshishini
Ucoceka njani indawo yoboya